KYAW CHAN NYEIN: KYAW CHAN NYEIN နေ.စဉ်အရေးကြီးအလုပ်များ
KYAW CHAN NYEIN နေ.စဉ်အရေးကြီးအလုပ်များ
KYAW CHAN NYEIN နေ.စဉ် အရေးကြီး အလုပ်များ
၁. ကျန်းမာအောင် ရေသောက်၊ အီးပါ၊ သွားတိုက်၊ ရေချိုး၊ အားကစားလုပ်၊စောစောအိပ်
၂. ပညာတတ်အောင် ကျောင်းသွား စာသင် စာဖတ် စာကျက်
၃. TIME IS KNOWLEDGE နေ.တိုင်း ဗဟုသုတ အသစ် အသစ်များရအောင် ရှာဖွေ လေ.လာ မေးမြန်း သင်ယူ စုဆောင်းပါ